Golaha Aqalka Sare oo la kulmay Wasiiradii Hirshabeelle u tagay Xalinta Xiisada ka taagan Jowhar. | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Golaha Aqalka Sare oo la kulmay Wasiiradii Hirshabeelle u tagay Xalinta Xiisada...
Wasiirka Wasaaradad Amniga qaranka iyo Wasiirka Arimaha Gudaha ee Xukumada Soomaaliya oo shalay ka soo laabtay magaalada Jowhar ee Xarunta Hirshabeelle ayaa maanta looga yeeray xarunta Aqalka Sare ee Soomaaliya kuwaas oo maanta ka qeyb galay kulan gaar ah oo ka dhacay Xarunta Golaha.
Xildhibaanada Aqalka Sare ayaa kulankooda maanta su’aalo ku weydiiyay Wasiirada iyadoo si gooni ah shirka diirada lagu saaray Xiisadda Hirshabeelle.
Wasiirka Arrimaha Gudaha Cabdi Faarax Juxa iyo Wasiirka Waxbarashada C/raxmaan Daahir Cusmaan oo kulanka qeyb galay ayaa ka jawaabay su’aalo la weydiiyay halka la sheegay in uu shirkasi ka maqnaa Wasiirka Amniga qaranka.
Xiisadda Hirshabeelle ayaa wali taagan waxaana la filayaa in ay dhawaan xukumadda ku dhawaaqdo wixii ka aaminsan tahay xil ka qaadistii Madaxweynaha maamulkasi lagu sameeyay.